Qarax Gaadhi oo Ka Dhacay Saaka Magaaladda Muqdisho – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Qarax loo adeegsaday gaadhi walxaha qaraxa lagu soo rakibay ayaa goor dhawayd ka dhacay agagaarka huteel weheliye ee magaaladda Muqdisho.
Qaraxan ayaa la sheegay ilaa hadda inay ku dhinteen 5 qof, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tiro kale oo dad ah oo ka ag dhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa gaadhay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo gaadhida gurmadka ah, waxaan la sugay amaanka goobta. Dadka ku dhaawacmay ayaa loola cararay cusbitaaladda magaaladda.
Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ilaa hadda warar faahfaahsan ka soo saaray, waxaana socda baadhitaano la xidhiidha qarax.